Midira sy manohana ny fampielezan-kevitra! - Fanentanana manerantany ho an'ny fandriam-pahalemana
Midira amin'ny fampielezan-kevitra anio ary ampio izahay #S spreadPeaceEd.
Tsindrio eto raha handefa fanamarinana andrim-panjakana na fikambanana!
Ny fidirana an-tsehatra dia fanehoana tsotra ny fanolorantenanao hanohana ny tanjon'ny Global Campaign for Peace Education:
Fananganana fahatsiarovan-tena ho an'ny besinimaro sy fanampiana ara-politika amin'ny fampidirana ny fampianarana fandriam-pahalemana amin'ny sehatry ny fanabeazana rehetra, ao anatin'izany ny fanabeazana tsy ofisialy, any amin'ny sekoly rehetra manerantany;
ary, hampiroborobo ny fanabeazana ny mpampianatra rehetra hampianatra ho an'ny fandriampahalemana.
Rehefa manatevin-daharana dia mba miangavy anao hiditra ao!
Lisitry ny mpilatsaka an-tsitrapo: manatevin-daharana an'ity lisitra ity raha te handre momba ny fahafahan'ny mpilatsaka an-tsitrapo manohana ny Fanentanana ianao.
Mpandrindra firenena: manatevin-daharana an'ity lisitra ity raha te-hanangana toko nasionaly amin'ny fampielezan-kevitra ianao - na raha te-handamina ho fanohanana ny fampielezan-kevitra ao amin'ny faritra eran'izao tontolo izao ianao.
Safidio ny safidinao (afaka manavao ireo ianao amin'ny fotoana rehetra). Izay rehetra manatevin-daharana dia mandray ny taratasim-bolantsika isam-bolana - fitambaran'ny vaovao, fandalinana, fandaharam-pianarana, hetsika ary tatitra avy amin'ny lafivalon'izao tontolo izao. Ho fanampin'izay, afaka misafidy ny hisoratra anarana amin'ny:
Lahatsoratra rehefa mitranga izany: Raiso ny famintinana isan'andro ny fametahana vaovao rehefa avy nivoaka ny milina fanaovan-gazety izy ireo!
Digest isan-kerinandro: Mahazoa vaovao isan-kerinandro, tsikera sy hetsika!
Fanairana momba ny hetsika: Mahazoa mailaka momba ny fampielezan-kevitra mora tohina ara-potoana sy ny fahafaha-mamatsy vola.
Midira amin'ny fampielezan-kevitra!
Firenena *AfghanistanAlbaniaAlzeriaAmerican SamoaAndorraAngolaAnguillaTendrontany AtsimoAntigua sy BarbudaArzantinaArmeniaao ArubaAostraliaAotrisyAZERBAÏDJANBahamasyBahrainBangladesyBarbadosBelarosiaBelzikaBelizeBeninBermudesBhutanBoliviaBosnia-HerzegovinaBotsoanaBrezilaBrunei DarussalamBolgariaBorkina FasoBurundiKambodzaKameronaKanadaCape VerdeCayman IslandsRepoblikan'i Afrika AfovoanyTchadShilyShinaKrismasy IslandKolombiaComoresCongoNosy CookCosta RicaKroasiaKiobàSipraRepoblika TchekyDanemarkDjiboutiDominicaRepoblika DominikaninaTimor atsinananaEkoateraEjiptaEl SalvadorGinea GineaEstoniaEthiopiaNosy FalklandFaroe IslandsFidjiFailandyFrantsaGuyane frantsayGabonGambiaGeorgiaGermanyGhanaGibraltarGrande-BretagneGresyGroenlandyGrenadyGuatemalaGineaGuinée BissauGoianaHaitiHondurasHong KongHongriaIslandyIndiaIndoneziaIranIrakIrlandyIsiraelyItaliaIvory Coast (Cote D'Ivoire)JamaikaJapanaJordaniaKazakhstanaKenyaKiribatiKoetyKyrgyzstanLaosLetoniaLibanonaLesothoLiberiaLibyaLiechtensteinLitoaniaLuxembourgMacauMakedoniaMadagasikaraMalawiMaleziaMaldivesMaliMaltaNosy MarshallMartinique (Frantsay)MaoritaniaMaorisyMeksikaMikrôneziaMoldaviaMonacoMongoliaMontserratMaraokaMozambikaMyanmarNamibiaNauruNepalPays-BasNovely zelandyNicaraguaNigerNizeriaKorea AvaratraNorvezyOmanPakistanPalauPalestine (faritany nozanahiny)PanamaPapouasie-Nouvelle-GuinéeParaguayPeròFilipinaPoloninaPolynesia (Frantsay)PortiogalyPuerto RicoQatarRomaniaFederasiona RosianaRwandaS. Georgia & S. Sandwich Isls.Saint HelenaSaint Kitts & Nevis AnguillaSaint LuciaSaint Pierre sy MiquelonSaint Tome sy PrincipeSaint Vincent & GrenadinesSamoaSan MarinoArabia SaoditaSenegalSeychellesSierra LeoneSingaporeRepoblika SlovakySloveniaNosy SalomonSomaliaAfrika AtsimoKorea AtsimoEspainaSri LankaSodànaSurinameSoazilandySoedaSoisaSyriaTadjikistanTaiwanTanzaniaThailandTogoTongaTrinidad sy TobagoToniziavorontsilozaTurkmenistanNosy Turks sy CaicosTuvaluOgandaUkraineEmirà Arabo Mitambatrafanjakana mitambatraEtazoniaUruguayUzbekistanVanuatuVatican City StateVenezoelai VietnamVirgin Islands (Britanika)Western SaharaYemenIogoslaviaZambiaZimbaboe
Safidio ny lisitra: Mivoady aho fa hanohana ny tanjon'ny Global Campaign for Peace Education Digest isan-kerinandro Lahatsoratra rehefa mitranga izany Fanairana Lisitry ny mpilatsaka an-tsitrapo Mpandrindra ny firenena
Amin'ny alàlan'ny fidirana aminao dia manaiky ny handraisana mailaka avy aminay ianao (arakaraka ny safidinao izay azo ovaina amin'ny fotoana rehetra) ary mifanaraka amin'ny anay politika fiarovana fiainan'olona. Azonao atao ny misoratra anarana amin'ny fotoana rehetra.
Misaotra anao nanatevin-daharana ny Fanentanana eran-tany ho an'ny fandriam-pahalemana! Azafady mba zahao ny boaty fampidirana na spam anao raha mila mailaka avy aminao [email voaaro] hanamafisana ny fisoratana anarana.